ပဲခူး မှ ရန်ကုန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ပဲခူး မှ ရန်ကုန်
ပဲခူး မှ ရန်ကုန်
Posted by Mလုလင် on Dec 15, 2011 in Photography | 25 comments
ရန်ကုန် အတွင်း ညရှုခင်း ၂ တင် ဖို့ ကို ဒီဇင်ဘာ ကျော်မှ တင် နိုင်တော့မယ်။ ဒီကြားထဲ လဲ သူများ တင်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ အားကျ တာနဲ့ မနေနိုင်လို့ တင်မိပြန်ပြီ။
ပုံ (၁) ဒီပုံ က ပဲခူး က . မြသာလျောင်း မှာပါ။ ကိုရင်လေး တွေကို အကူအညီ တောင်းပြီးတက် ဖို့ ပြောထားရတဲ့ ပုံပါ။ ဒါ့ပုံ ကို ခုန်ဆွ ခုန်ဆွ ရိုက်ခဲ့ရတဲ့ ပုံပါ။ နေ့ လည် ၁၂ နာရီ ကျော်ကျော် ဆိုတော့ ခြေချ တိုင်း ပူ နေတော့တာ ပါပဲ။
ပုံ (၂) ဒီပုံ ရဖို့ ကတော့ ရွှေဂူလေး ဘုရား ကနေ စမ်းချောင်း ကို ကျော်ပြီး လမ်းနဲနဲ လျှောက်ရပါတယ်။ မယ်သီလရှင် တွေ အများကြီး နဲ့မို့ .. အမှတ်တရ ရိုက်ဖြစ်သွားပါတယ်။
ပုံ (၃) ရွှေတိဂုံ ရောက်တော့ ငြမ်းတွေ နဲ့ မို့ မရ.ရတာ ရိုက်ပြီး ပြန်ခဲ့ရပါသည်ပေါ့။
ပုံ (၄) သနပ်ပင် အလွန် မင်းရွာ ကိုသွားတဲ့ လှေဆိပ် နားက တံတားပေါ်က ပါ။ မင်းရွာ သွားဖို့ အချိန်လွန် သွားလို့ သွားမောကြီး ပေါ့ …
ပုံ(၅) ရိုက်ပြီးထဲက အတော် အပြောခံ ရတဲ့ ပုံပါ . မဖျက်ပစ် ရက်လို့ သိမ်းထားရင်း ပြန်တင်ဖြစ်တာ .. ပဲခူး 10 မိုင်ကုန်း က အိုးလုပ်ငန်း တစ်ခု မှာ ပါ . အပြန်ခရီးမှာ ပေါ့ ..
ပုံ (၆) မြို့ တော် ခန်းမ
ပုံ (၇) ဘားလမ်း
ပုံ (၈) ပြန်ခါနီး ပေါ့ .. အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ခြေသလုံး ဆေးလူးပြီး တန်းအိပ်တော့ တာပဲ …
အားပေးသွားပါတယ် နံပါတ် ၄ ပုံလေးသဘောကျတယ်..
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် . နံပါတ် (၄) ပုံ ကို ကျွန်တော် လဲ ကြိုက်ပါတယ်။
ကျုပ် ကတော့ အိုးတွေ ကို ရိုက်ပြထားတဲ့ ပုံ ကြိုက်တယ်ဗျာ
အိုးလေး လှုပ်ပါဟေ့ အိုးလေး လှုပ်ပါဟေ့
အင်း ပုံလေးတွေက ဖိုတိုရှော့နဲ့များ ပြန်ပြင်ထားလေသလား….
ဟုတ်ကဲ့ ပြင်ထားပါတယ်.. မမ မနောဖြူ။ စည်းလွတ်ဝါးလွတ် ပြင်တာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ subject တွေထည့်တာဖြုတ်တာ တွေ မလုပ်ပါဘူးလို့ ပြောချင်တာပါ။ Cropping လုပ်တယ်။ color အပြင်း အပျော့ လုပ်တယ်။ Expo: နဲနဲ ကစားတယ်။ ပုံ (6) နဲ့ (7) ကိုတော့ ရသ တမျိုး ပေးမယ်ထင်လို့ .. white balance ကစား ထားပါတယ်။ ကျွန်တော် က filter သုံး တာများတယ် မမ မနောဖြူ ရဲ့. comment အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးပုံ Sunset ကိုကြိုက်တယ်ဗျ …
ကျနော် ခုတလော sunset ရောဂါထနေတယ်…ဗျို့ …
morning glory က မထနိုင် …sunset ကျတော့ (နေ၀င်တာ စောလို့)မမှီ နဲ့ …
အဲ့ဒီ့ နောက်ဆုံးပုံ က ကံကောင်းတာဗျ .. ဆူးလေ နဲ့ မြို့တော်ခန်းမ ကို မဲ နေတာ ပြန်တော့မယ် ဆိုပြီး နောက်လှည့်မှ နေက အနားတင် ကပ်နေတာ .. အဲဒါနဲ့ ကစ်တာ . Tripod တောင် မထောင် လိုက်ရဘူး …
ဒါနဲ့ စကားမစပ် bro Inzargi .. အဲ့မှာ နှင်းကျ စေတဲ့ filter ရှိလားဗျ ..
light cross ဖြစ်တဲ့ ဟာတော့ရှိတယ်
နှင်းကျတာတော့ ကျနော်လည်း မသိဘူးဗျ…
IR ရိုက်ရင်တော့ ရမလားဘဲ..
အိုးပုံကို ရိုက်ပြထားတဲ့ စိတ်ကူးကို အလွန်သဘောကျမိပါတယ်….
မတူတဲ့ ရှုထောင့်ကနေ စိတ်ကူးလေးကလည်း ကောင်းပါတယ်…
အဲ့ဒီ့ ပုံမှာ က sun flare လေး က စားတာ ဗျ ..
နံပါတ် ၄ ပုံမှာလဲ ရေပြင်မှာ ကြယ်တွေရောက်နေလို့ကြိုက်ပြန်ရော
“သူတို့ မျှားသွားတဲ့ ကျွန်တော့ ရင်ဘတ်ထဲက ကြယ်လေးတွေ” သူ့ နံမည် လေ အဲဒါက.. တံတား လက်ရန်း (သံချောင်း ပူပူ) ပေါ် တက်မှောက်ပြီး ရိုက်ထားတာ။ နေ့လည် 1 နာရီ ဆိုတော့ နေက ခေါင်းပေါ် ကျော် နေပြီ လေ. အဲလို reflection လေး ရလို့ .. ကံကောင်းတယ်။
Photo by yinaung ဆိုတော့ M-Lulin က yinaung ပေါ့နော။
ပုံ(၁) (၂) (၄) ကြိုက်တယ်။ ပုံ(၂) က မြသာလျှောင်းဘုရားမှာလား၊ ရွှေဂူလေး
ဘုရားမှာလား၊ သူတို့ကိုရော ထိုင်ခိုင်းထားရတာလား။ ပုံ(၁) ကခြေတော်ရာတွေ
ပုံ (၂) က ရွှေဂူလေး က နေ မြသာလျောင်းကို သွားတဲ့ တောလမ်း ပေါ်က တန်ဆောင်း မှာပါ။ အဲ့ဒီ့ နေ့ က sunday မို့လို့ သူတို့ဘာသာ သူတို့ အလှူခံ နေတာပါ။ အဲလောက် လူအများကြီး ထိုင်ခိုင်းဖို့ က လွယ်ဘူးဗျ … အဲ့ ပုံ (၁) က ဆုရ ဓတ်ပုံ ဖြစ်ဖူးတယ်ဗျ။ senior တစ်ယောက် ရိုက်တဲ့ ပုံ ဆုရ ဖူးတယ်။ ကျွန်တော့ ပုံ ကတော့ ဘာမှ မရဘူး .. ဟီး ..
ပုံလေးတွေ အားလုံး ရိုက်ထားတာလေးတွေ ကောင်းပါတယ်။
ပုံ ၅ ကို ရိုက်ပြီးထဲက အတော် အပြောခံ ရတဲ့ ပုံ ဆိုပေမယ့် flare ကိုတောင် ကိုယ်ပြလိုတဲ့ ပြချက်လေးတွေ အတွက် တမင်ပေါ်အောင် ရိုက်ရတာတောင် ရှိသေးတော့ ကြိုက်ပါတယ်။
ပွဲကြိုက်ခင် မဟုတ် ဘဲ …. အိုးကြိုက်ခင် လို့ ပြောတာ ဦး စိန်သော့ ရဲ့ . ဟီး.
လေးစာပါတယ် M-Lulin ရေ။
ဦး ဘလက်ချော .. အပျော်မကြံ ရဘူး နော်..
တစ်ရက်လောက်တော့ မင်းရွာဘက် သွားဦးမယ်ဗျာ …လိုက်မယ့် သူတွေ PM လေးပို့ထားပေးပါလား ..
ဆူးလေအပေါ်ဆီးကပုံရယ်။ ကျောက်တိုင် ပုံရယ်ကို ဘယ်ကရိုက်ထားသတုန်း
ဆူးလေ ကမ်းနားလမ်းဘက်ခြမ်း က ဆောက်လက်စ တိုက် ပေါ်ကနေ တက် ရိုက်ထားတာ ပါဗျို့  . .
မင်းရွာသား မင်းရွာသား says:
japanေ၇ာက်နေပေမဲ့ မင်းရွာတော့လွမ်းတယ်ဗျာ ရွာရဲ့ ကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျေးဇူး အထူးပါဗျာ . . ဒီ ပိုစ့် လေး တောင် ၁ နှစ် ခွဲ ကျော်နေပြီ ပဲဗျ . . :-)